Kodzero-dzevanhu, 27 Kukadzi 2017
Muvhuro 27 Kukadzi 2017
Vanasikana Voita Chipfambi kuChipinge Kuti Vararame
Vanasikana vanogara kuChipinge vanoti vava kuita zvepabonde kuitira kuti vararame.
Vabvakure Vorwiswa Zvinotyisa muSouth Africa
Zvinhu zvinonzi zvakaita manyama amire nerongo kuSouth Africa zvikuru muPretoria zvichitevera kurwisana kunotyisa pakati pezvizvarwa zveSouth Africa nezvekune dzimwe nyika dzakaita seZimbabwe, Somalia ne Nigeria.
Vashandi Voramba Kunyengedzwa neMasitendi eHurumende
Sachigaro weApex Council, Amai Cecilia Alexander, vanoti semaziviro avo vashandi vari kuda kupiwa mabhonasi avo iri mari nekuti sangano ravo rine humwe hurongwa hwekutsvagira nhengo dzaro masitendi ekuvakira dzimba richishanda nebazi rezvekutongwa kwematunhu.
Kukadzi 23, 2017
Vechidiki veZanu PF Vofora muBulawayo Vachitsigira VaMugabe
Munyori wezvemabasa ekushanya muboka revechidiki muZanu PF, Muzvare Betty Dhliwayo, vatenda vamwe vavo nekufora uku vachiti zvinoratidza rutsigiro rwavo kuna VaMugabe.
Vanhu Vopesana Zvakasimba paHurongwa Hwekuda Kuvandudza Bumbiro reMitemo
Sachigaro wekomiti paramende iyi, VaZiyambi Ziyambi, vabvuma kuti pane mifungo miviri panyaya yekuti mutungamiri wenyika adome Chief Justice here kana kuti kwete pamisangano yose yavakaita.
Kukadzi 22, 2017
Vakawanda Voshushikana Vachiti VaMugabe Vari Kutambisa Mari paBhavhudhe Ravo
Mabiko ebhavhudhe raVaMugabe achaitwa paRhodes Estate Preparatory School kuMatopos, chinhanho makumi maviri kumadokero kwakadziva kuchemhembe kweguta reBulawayo.
Nyaya yeChigaro chaVaMugabe Yotemesa Vakawanda Musoro muZanu PF
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, nemusi weChipiri vakasvitsa makore makumi mapfumbamwe nematatu zvichireva kuti pavatungamiri venyika vose vepasi rino ndivo vanyanya kukwegura.